သွားတိုက်ဆေးကို အလှအပေအတွက် အသုံးပြုနည်း ၅ မျိုး •
Voice of news
သွားတိုက်ဆေးကို အလှအပေအတွက် အသုံးပြုနည်း ၅ မျိုး
23/11/2019 Yan Naing Life Style 0
အများစုက သွားတိုက်ဆေးကို သွားကျန်းမာရေးအတွက်သာ အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သွားတိုက်ဆေးက သွားကျန်းမာရေးအပြင် အလှအပရေးရာ အတွက်ပါ များစွာ အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာကို ဗဟုသုတ ရရှိစေရန်နှင့် ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ စမ်းသပ်နိုင်ရန်အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) လက်သည်း အလှအတွက် အသုံးပြုနည်း
သွားတိုက်ဆေး အနည်းငယ်ကို ခွက်လေးတစ်ခုထဲသို့ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ဂွမ်းစလေးဖြင့် ယူ၍ လက်သည်းခွံ/ ခြေသည်းခွံပေါ် ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ထိုသို့ မကြာခဏ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ လက်သည်းလေးများ တောက်ပြောင် လှပ လာပါလိမ့်မယ်။ အလွယ်တကူ ကျိုးပဲ့ခြင်း မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၂) နှုတ်ခမ်းသားအတွက် အသုံးပြုနည်း
သွားတိုက်ဆေးကို ဝါဂွမ်း အနည်းငယ်ပေါ်တင်ပြီးနောက် နှုတ်ခမ်းသားပေါ်သို့ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ထို့နောက် သွားတိုက်တံ (အနု) ဖြင့် ၅ မိနစ်ခန့် ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ထို့နောက် ရေအေးလေးဖြင့် ဆေးပေးပါ။ သင့် နှုတ်ခမ်းသာ ညိုခြင်း၊ အသားအရေ မညီခြင်းကို သိသိသာသာ သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
(၃) ဝက်ခြံ အတွက် အသုံးပြုနည်း
ဝက်ခြံကို ကုသဖို့အတွက်လည်း သွားတိုက်ဆေးကို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ နားကြပ်တောင်လေးဖြင့် သွားတိုက်ဆေးကို တို့ယူ ပြီး ဝက်ခြံ ရှိသောနေရာ၊ မျက်နှာပေါ်ရှိ အမာရွတ်များကို တို့လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် ၂၀ ခန့် ထားပြီးနောက် မျက်နှာကို ရေအေးဖြင့်သာ သစ်ပေးပါ။
(၄) မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနည်း
အဆီပြန်သော မျက်နှာအသားရေအတွက် သွားတိုက်ဆေးကို မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ သွားတိုက်ဆေးနှင့် ဆား အနည်းငယ် ကို ပန်းကန်အသေးလေးထဲသို့ ထည့်၍ သမအောင် မွှေပါ။ ထို့နောက် မျက်နှာပေါ်သို့ မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်အားရှောင်၍ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ၁၀ မိနစ်ခန့် ထားပြီးနောက် ရေအေးဖြင့် မျက်နှာ သစ်ပေးပါ။
(၅) ဆားဝက်ခြံများ အတွက် အသုံးပြုနည်း
နားခေါင်းနားတစ်ဝိုက်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွားတိုက်ဆေးကို နူးညံ့သော သွားတိုက်တံပေါ် တင်ပြီနောက် ဆားဝက်ခြံရှိသော နားခေါင်းနား တစ်ဝိုက် ၂ မိနစ်ခန့် ညင်သာစွာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ထို့နောက် ရေအေးဖြင့် ဆေးပေးပါ။ ထိုသို့ မကြာခဏ ပြုလုပ်ပေးပါက ဆားဝက်ခြံများ သိသိသာသာ သက်သာပျောက်ကင်းပါလိမ့်မယ်။
လွယ်ကူရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းများ ဖြစ်တာကြောင့် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မျှဝေလိုက်ပါဦးနော် … အားလုံးပဲ လှပပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ ရှင် …
သတင်းအရင်းအမြစ် – YouTube
အမြားစုက သှားတိုကျဆေးကို သှားကနျြးမာရေးအတှကျသာ အသုံးပွုတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ သှားတိုကျဆေးက သှားကနျြးမာရေးအပွငျ အလှအပရေးရာ အတှကျပါ မြားစှာ အသုံးဝငျတယျ ဆိုတာကို ဗဟုသုတ ရရှိစရေနျနှငျ့ ကိုယျတိုငျ လကျတှေ့ စမျးသပျနိုငျရနျအတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) လကျသညျး အလှအတှကျ အသုံးပွုနညျး
သှားတိုကျဆေး အနညျးငယျကို ခှကျလေးတဈခုထဲသို့ထညျ့ပါ။ ထို့နောကျ ဂှမျးစလေးဖွငျ့ ယူ၍ လကျသညျးခှံ/ ခွသေညျးခှံပျေါ ပှတျတိုကျပေးပါ။ ထိုသို့ မကွာခဏ ပွုလုပျပေးခွငျးဖွငျ့ သငျ့ရဲ့ လကျသညျးလေးမြား တောကျပွောငျ လှပ လာပါလိမျ့မယျ။ အလှယျတကူ ကြိုးပဲ့ခွငျး မှလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
(၂) နှုတျခမျးသားအတှကျ အသုံးပွုနညျး
သှားတိုကျဆေးကို ဝါဂှမျး အနညျးငယျပျေါတငျပွီးနောကျ နှုတျခမျးသားပျေါသို့ သုတျလိမျးပေးပါ။ ထို့နောကျ သှားတိုကျတံ (အနု) ဖွငျ့ ၅ မိနဈခနျ့ ပှတျတိုကျပေးပါ။ ထို့နောကျ ရအေေးလေးဖွငျ့ ဆေးပေးပါ။ သငျ့ နှုတျခမျးသာ ညိုခွငျး၊ အသားအရေ မညီခွငျးကို သိသိသာသာ သကျသာစပေါလိမျ့မယျ။
(၃) ဝကျခွံ အတှကျ အသုံးပွုနညျး
ဝကျခွံကို ကုသဖို့အတှကျလညျး သှားတိုကျဆေးကို အသုံးပွုလို့ ရပါတယျ။ နားကွပျတောငျလေးဖွငျ့ သှားတိုကျဆေးကို တို့ယူ ပွီး ဝကျခွံ ရှိသောနရော၊ မကျြနှာပျေါရှိ အမာရှတျမြားကို တို့လိမျးပေးပါ။ မိနဈ ၂၀ ခနျ့ ထားပွီးနောကျ မကျြနှာကို ရအေေးဖွငျ့သာ သဈပေးပါ။
(၄) မကျြနှာပေါငျးတငျဆေးအဖွဈ အသုံးပွုနညျး
အဆီပွနျသော မကျြနှာအသားရအေတှကျ သှားတိုကျဆေးကို မကျြနှာပေါငျးတငျဆေးအဖွဈ အသုံးပွုလို့ ရပါတယျ။ သှားတိုကျဆေးနှငျ့ ဆား အနညျးငယျ ကို ပနျးကနျအသေးလေးထဲသို့ ထညျ့၍ သမအောငျ မှပေါ။ ထို့နောကျ မကျြနှာပျေါသို့ မကျြလုံးနားတဈဝိုကျအားရှောငျ၍ သုတျလိမျးပေးပါ။ ၁၀ မိနဈခနျ့ ထားပွီးနောကျ ရအေေးဖွငျ့ မကျြနှာ သဈပေးပါ။
(၅) ဆားဝကျခွံမြား အတှကျ အသုံးပွုနညျး
နားခေါငျးနားတဈဝိုကျမှာ ဖွဈတတျတဲ့ ဆားဝကျခွံတှကွေောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈရတတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သှားတိုကျဆေးကို နူးညံ့သော သှားတိုကျတံပျေါ တငျပွီနောကျ ဆားဝကျခွံရှိသော နားခေါငျးနား တဈဝိုကျ ၂ မိနဈခနျ့ ညငျသာစှာ ပှတျတိုကျပေးပါ။ ထို့နောကျ ရအေေးဖွငျ့ ဆေးပေးပါ။ ထိုသို့ မကွာခဏ ပွုလုပျပေးပါက ဆားဝကျခွံမြား သိသိသာသာ သကျသာပြောကျကငျးပါလိမျ့မယျ။
လှယျကူရိုးရှငျးသော နညျးလမျးမြား ဖွဈတာကွောငျ့ စမျးသပျကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ ဒီအကွောငျးတှကေို မသိသေးတဲ့ သူငယျခငျြးတှကေိုလညျး မြှဝလေိုကျပါဦးနျော … အားလုံးပဲ လှပပြျောရှငျစရာကောငျးသော နရေ့ကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ ရှငျ …
သတငျးအရငျးအမွဈ – YouTube
အောင်အိုးမှာအညွန့်ထိုး လာဘ်ပွင့်စီးပွားတိုး (ဓာတ်ဆင်နည်း)
ရေနစ် နေတာကို ဟန်လုပ်နေတယ် ထင်ပြီး ဓာတ်ပုံပဲ ရိုက်နေခဲ့ တာကြောင့် အသက်သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
”Celebrity အသက်အငယ်ဆုံး နိုင်ငံတကာ အကယ်ဒမီဆု” ရရှိခဲ့တဲ့သမီးလေး” ပြည့်ပြည့်”……
ဖိုဘီ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ သြဇာ အကြီးဆုံး အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်း ထွက်ပေါ်
ဝန်ကြီးချုပ်ကို မြို့ခံတဦးက ပုံးနဲ့ ထည့်ပြီးယူလာပြရတဲ့ ဆေးထိုးအပ် များတဲ့..” မြတ်စွာ ဘုရား ”
မိုး သီး မုန် တိုင်း တိုက် ခတ် လို့် ရေ ခဲ ပြင် ကြီး ဖြစ်
”ကမ္ဘာကျော် နပန်းသမားဘဝနဲ့ စည်းစိမ်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရဟန်းဝတ်နေတဲ့ ကိုယ်တော်နှစ်ပါး”…… ‘
Visit Today : 668
This Month : 9384
Hits Today : 5043
Total Hits : 1248648
Santhitsa provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in http://santhitsa.net/ (example – Local News,International News, Articles, Entertainment, Sport, Health, Funny, Cooking….etc). Hope our visitors enjoy our website.
မိတ္ထီလာတွင် ကားငယ်များ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သူက သုံးဘီး ဆိုင်ကယ် ပုံစံသစ် တီထွင်